Nomboka tamin’iny taona 2019 iny dia niroso tamin’ny fanenana ny isan’ireo ECD ireo ny minisitera araka ny andininy faha-3 amin’ny lalàna 94-0025 natao ny 17 novambra 1994, hoy ny fanazavana. Ny fifanarahana voavaky, nekena sy voasonian’ireo ECD dia milaza fa « Ny fifanarahana dia azo haato tsy misy fampilazana mialoha rehefa tonga ny daty fifaranan’ny fifanarahana ». Ity fanenana ny isan’ny ECD ity dia natao avy amin’ny vokatry ny fanadihadiana ara-kalitao natao isaky ny mpiasa hijerena ny fifanojoan’ny asa misy amin’ny toetra amam-pahaizan’ny mpiasam-panjakana, ny tsy maha eny amin’ny toeram-piasana matetika ny mpiasa sasany hita nandritra ny fitsirihana natao tampoka, ny politikan’ny fitsitsiana izay nofaritana anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE), indrindra ny fitantanana ny fandaniana amin’ny karaman’ny mpiasa. Ho an’ny minisiteran’ny seraserasa sy ny kolontsaina, ny fihoaran’ny isan’ny mpiasa mihoatra amin’ny filana any amin’ireny “Directions” sy “Services” ireny, dia mitarika tsy fisian’ny asa ho azy ireny. 52% be izao ny mpiasa ECD ao, hoy ny fanazavana. Raha 1924 no isan’ny mpiasa, ny 999 no ECD, ny 620 ao amin’ny foibe sy eny amin’ny faritra, ny 379 kosa dia ao anatin’ny tetibola manokan’ireo « organismes rattachés ». Araka izany, 52 ireo fifanarahana ECD tsy nohavaozina intsony tamin’ny taona 2019 ary41 tamin’ity voalohan’ny taona 2020. Hitohy eny anivon’ireo « organismes rattachés » ihany koa io fepetra io. Etsy an-daniny kosa anefa dia nisy ny ECD 90 izay efa niasa ela tato amin’ny minisitera ka nahafeno ny fepetra voalaza etsy ambony ary nampidirina ho Employés Fonctionnaires Assimilés (EFA) tamin’iny taona 2019 iny, hoy hatrany ny fanazavana. Fandroahana ve ny toromariky ny filoha amin’ny fitsitsiana? Ahoana ny minisitera hafa ?